မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: လူ ၊ နာမည် နှင့် ဇာတာ
စီးပွားရေး မေးသည့်လူတွေလည်း ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး အဓိကပြုမေးကြသူတွေလည်း ပါသည်။ သမီးရည်းစား အဆင်မပြေလို့ မေးကြသူတွေလည်းပါသည်။ ကျန်းမာရေးမေးကြသည့်သူတော့ ရှားပါသည်။ လူဆိုသည်ကလည်း …မကျန်းမာတော့မှသာ ကျန်းမာရေးကို သတိရကြတော့သည်လေ။ သာမန် အချိန်များမှာတော့ သတိမရဖြစ်ကြသူသာ များသည်။
ကောင်းပြီ…၊ သူတို့တွေ မေးနေသမျှကို အားလုံးဖြေနိုင်ပါသလား။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရပါမူ အားလုံး ကျွန်တော် မဖြေနိုင်ပါ။ အားလုံး ကျွန်တော် မသိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး အလုံးစုံကို သိမြင်တော်မူနိုင်သည်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင် သာလျှင်ရှိပေလိမ့်မည်။ လူသာမန် ဗေဒင်ဆရာတစ်ဦးမျှသာ ဖြစ်သော ကျွန်တော့်မှာမူ …မဖြေနိုင်သော မေးခွန်းအချို့ ရှိခဲ့ရ ၊ ကြုံခဲ့ရပါသည်။
သို့သော် … ဥာဏ်ပူဇော်ခပေးအပ်ပြီး …ယုံကြည်ကိုးစားမှုဖြင့် မေးလာသည့်မေးခွန်းများမို့ …ကျွန်တော့်တွင် ရှိသော ဥာဏ်စွမ်းကို သွန်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ဖြေပေးရ၏ ။ ထို့အတူ မဖြေနိုင်သော မေးခွန်းများဖြစ်စေ၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ပြတ်ပြတ်သားသား မရွေးခြယ်နိုင်သော အနေအထားများကိုဖြစ်စေ…ရိုးရိုးသားသား ၀န်ခံပြီး …ခန့်မှန်းချက်အတိုင်းသာ ကျွန်တော် ဟောကြား ရေးသားပေးလိုက်သည်။
အလွန်သေချာသည့် အချက်များကိုမူ ….မေးမြန်းသူ ဇာတာရှင်အတွက်လည်း အကျိုးဖြစ်စေနိုင်မည့် အချက်အလက်ဖြစ်ပါက … ဟိုက်လိုက်ခ်ျပြပြီး ..မီးမောင်းထိုး အကြံပေး လိုက်ရစမြဲ။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့…………. ဟောစာတမ်းဇာတာတစ်စောင်ကို နမူနာ လေ့လာကြည့်ပါ။
၁၃၃၅ခုနှစ် ဖွား သောကြာသား ပုတိဖွားအမည်မှာ (သောကြာ + အင်္ဂါ ) ကမ္မကာရက အမည် အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
မေးမြန်းသူသည် … အောက်ပါမေးခွန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းမေးမြန်းထားခဲ့ပါသည်။
(၁) အိမ်ထောင်ရေး ကောင်း / မကောင်း
(၂) အလုပ်အကိုင် နှင့် ဘ၀အောင်မြင်ရေး ကံ
(၃) ဘယ်ဒေသမျိုးမှာ အခြေချခွင့် ရနိုင်မလဲ …..
မေးခွန်း နံပါတ် (၁) သည် ….ဖြေကြားရန် အဆင်ပြေသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ သူ၏ မူလမဟာဘုတ် ဇာတာခွင် နှင့် …နာမည်အရ ထိုမေးခွန်းကိုဖြေရန် စစ်ဆေးကြည့်ပါက……..
သူသည် ၅ခုကြွင်း မဟာဘုတ်ဖွား ၊ သောကြာ ပုတိဖွား ဇာတာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သဖြင့် အောက်ပါ မဟာဘုတ် ဇာတာခွင် တွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ ဇာတာတွင် ….နာမည်အရင်းစာလုံးလည်းဖြစ် ၊ မွေးနံလည်းဖြစ်သော သောကြာသည် ပုတိဌာနတွင် ရပ်တည်ထားပြီး ၊ နာမည်အဖျားစာလုံးမှာ အင်္ဂါ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရာဇဌာနတွင် ရပ်တည် ထားကြောင်းတွေ့ရှိရမည်။
မွေးနံ သည် … အထွန်းဌာနရှိ ၄ဟူးနှင့်လည်းကောင်း ၊ နာမည်အဖျားစာလုံး အင်္ဂါသည် သိုက်ဌာနရှိ စနေနှင့်လည်းကောင်း အသီးသီး ပက္ခ မိလျှက် ရှိကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်သည်။
နံပါတ်တစ်မေးခွန်း ဖြစ်သော …
အိမ်ထောင်ရေး ကောင်း/ မကောင်း မေးခွန်း အတွက် …..စစ်ဆေးတွက်ချက်မည်ဟု ဆိုပါက
နာမည်အဖျားစာလုံးဂြိုဟ်၏ သဘာဝ … တို့ကို စစ်ဆေးကြည့်ရပါမည်။
ဆပွတ်ဂြိုဟ်သည် ဗုဒ္ဓဟူးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးသည် အထွန်းဌာနတွင် ရပ်တည်နေပြီး မွေးနံနှင့် ပက္ခမိနေသော ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်မှာ ပထမ အားနဲချက်ကိုဖော်ပြသည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် မရဏဌာနတွင် ရပ်တည်နေသည်။ မိသားစု အဖွဲ့အစည်းနှင့် …ကင်းကွာရခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းမှ နှုတ်ထွက်ရတတ်ခြင်းကို အဆိုပါအနေအထားက ပြုနိုင်သော အနေအထားဖြစ်သည်။ (မှတ်ချက် / တနင်္ဂနွေ မရဏ ရပ်တည်နေရုံဖြင့် မိသားစုကံမကောင်းဟု မဆိုထိုက်ပါ) အထူးသဖြင့်
ကနဦးအစဖြစ်သော အချစ်ဦး ၊ အိမ်ထောင်ဦး များတွင် ….သတိထားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တနင်္ဂနွေသည် ကနဦးအစကာလများ ၊ဖြစ်စဉ်များအပေါ် အဓိက လွှမ်းမိုးပြီး….မရဏဌာနတွင် ရပ်တည်နေခြင်းကြောင့်…. ယင်းကနဦးဖြစ်စဉ်များတွင် အခက်အခဲ မကင်း ရတတ်ကြောင်း ဖော်ပြနေသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။
နာမည်၏ သဘာဝသည် …ကမ္မကာရက အမည်မျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်….တစ်ကြောင်း ၊ နာမည်အဖျား စာလုံးသည် လျှင်မြန်မှု နှင့် လျှပ်တစ်ပျက်ဖြစ်စဉ်များ ကို ဖော်ပြသော အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တစ်ကြောင်း …..အထက်ပါဇာတာရှင်သည် ဘ၀တွင် မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်ထောင်ကျတတ်သလို ..မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်ထောင်ရေး ကမောက်ကမ ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သတိပြုရန်လိုအပ်သည့် ဇာတာရှင်မျိုး ဖြစ်နေသည်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ပါက ……တွေ့ရှိရသမျှ အချက်များသည် …အိမ်ထောင်ရေးတွင် အနှောက်အယှက် မကင်းတတ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ကျခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြိုကွဲခြင်း များ ကြုံကြိုက်ရာတွင် ….လွယ်ကူမြန်ဆန်စေ တတ်ခြင်း၊ (အထူးသဖြင့် အမည်အဖျားစာလုံးသည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်နေပြီး …မွေးနံသောကြာနှင့် ကမ္မကာရက ပြုထားခြင်းကြောင့်…မရည်ရွယ်ဘဲ အိမ်ထောင်ကျခြင်း၊ မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်ထောင်ကွဲခြင်းမျိုး ဖြစ်ပွားရန် လွယ်ကူစေကြောင်း အထူးထင်ရှားစေသည်။ )
မူလနေ့နံ ထက် … မူလ ဖွားဇာတာသည် ပိုမိုအားကြီး၏။ မူလဖွားဇာတာထက် မှည့်ခေါ်ထားသည့်အမည် အရ အကျိုးအပြစ်သည် ပိုမိုထင်ရှားစေ၏။ သူ၏ မှည့်ခေါ်ထားသော သောကြာနံအစ + အင်္ဂါနံ အဆုံး အမည်သည် အိမ်ထောင်ရေးကံတွင် တည်ငြိမ်မှုနဲပါးစေပြီး ….မူလကတည်းပင် သောကြာ ပုတိဖွားလည်းဖြစ်ပြန်သဖြင့် …အိမ်ထောင်ရေးကံဇာတာတွင် ….အပြစ်မကင်းကြောင်း ပေါ်လွင်နေပေသည်။
ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် မထင်မှတ်ထားသော အခက်အခဲများပေါ်လာတတ်ကြောင်း နှင့် အိမ်ထောင်ပြုလွယ် ပျက်လွယ်ကြောင်း ….၊ သတိထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ဟောဆိုပေးခဲ့ပါသည်။ ( အချက်အလက်များ အရ ထင်ရှားသေချာစွာ ဟောဆိုနိုင်သော မေးခွန်းမျိုး ဖြစ်သည်။)
နံပါတ်နှစ် မေးခွန်းဖြစ်သော ….အလုပ်အကိုင် နှင့် ဘ၀အောင်မြင်ရေးကံ အခြေအနေကိုလည်း အထက်ပါ အတိုင်းပင် .…လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ သိမြင်နိုင်သဖြင့်ဖြေဆိုပေးခဲ့ပါသည်။ (ဆောင်းပါး ရှည်လျားမည်ဖြစ်သဖြင့် …ဒုတိယမေးခွန်းကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။)
နံပါတ်သုံး မေးခွန်းဖြစ်သော …….. (၃) ဘယ်ဒေသမျိုးမှာ အခြေချခွင့် ရနိုင်မလဲ …..
ဟူသည့် မေးခွန်း ကို တွေးကြည့်ပါ။ မေးလေ့မေးထ မရှိလှသော မေးခွန်းဆန်းမျိုးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ဘယ်မှာနေရင် အကျိုးပေးမလဲ ဟူသော မေးခွန်းမျိုးသာ အမေးများလေ့ရှိပြီး…ယခုမေးခွန်း မှာလည်း ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် မတူ ။ ဇာတာရှင်သည် … ဘယ်ဒေသမျိုးမှာဟု မေးထား သည်ကိုတွေ့ရပါမည်။
လွယ်မယောင်နှင့် ခက်ခဲသော မေးခွန်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ….ထုံးစံအတိုင်းပင် ဥာဏ်ပူဇော်ခပေးပြီး မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ….အတတ်နိုင်ဆုံး စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး …အလျော်ကန်ဆုံး ဖြေပေးနိုင်အောင်တော့ ကျိုးစားရပါသည်။
ကျွန်တော် ၏ အတွေ့အကြုံအရ ……နေရာဌာန ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများတွင်
(၁) ဌာန ဂြိုဟ်
(၄) နာမည်၏ သဘာဝ တို့ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန် လိုပါသည်။
အထက်ပါ ဇာတာရှင်၏ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာခွင်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ဇာတာရှင်သည် သောကြာနေ့ဖွား ဖြစ်သဖြင့် သူ၏ ဌာနဂြိုဟ်မှာ ….ကြာသာပတေးဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြာသာပတေးသည် ..ဘင်္ဂဌာနတွင် ရပ်တည်ထားသည်။ အမြစ်ဂြိုဟ်သည်လည်း … ကြာသာပတေးပင် ဖြစ်သည်။ တနင်္လာသည် အဓိပတိဌာနတွင် ရပ်တည်ထားပြီး ….အိမ်ယာထူထောင်မှုဂြိုဟ် ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေနှင့် ပက္ခ မိ ထားသည်။
ယင်းအနေအထားကား အခြားမဟုတ် …ငါးခုကြွင်းမဟာဘုတ်ဖွားများတွင် မကြာခဏတွေ့ရှိရတတ်သော ….မွေးရပ်မြေနှင့် အိမ်ယာထူထောင်မှု ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (၀ါ) တစ်နယ်တစ်ကျေးတွင် အိမ်ယာ ထူထောင်ရတတ်ခြင်း ကံ ဖြစ်လေသည်။
ဆက်လက်တွေးတောဆက်စပ် ကြည့်ပါက…… လူသားတို့၏ အခြေချမှုကို အစိုးရသော အမြစ်ဂြိုဟ် ကြာသာပတေးသည် …မွေးနံအရ ဌာနဂြိုဟ်ခေါ် …နေထိုင်ရာအရပ်ကို ဖော်ပြသောဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်နေပြီး တည်ငြိမ်မှုနဲပါးသော ဘင်္ဂဌာနတွင် ရပ်တည်နေသည်။ မူလအကြွင်းဖွားအရလည်း ….မွေးရပ်မြေနှင့် ခွဲခွာပြီး အိမ်ယာထူထောင်မှုပြုရတတ်သောကံကို လည်းတွေ့ရှိနေရသည်။ ထို့ထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် ကြည့်မည်ဆိုပါက…………………………
ဘင်္ဂဌာန ၏ အိမ်ရှင်ကား ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးသည် …မွေးနံသောကြာနေ့ဖွား အဆိုပါဇာတာရှင်အတွက် ဆပွတ်ဂြိုဟ် ခေါ် အိမ်ထောင်ဖက် ဆိုင်ရာဂြိုဟ်ဖြစ်နေသည်။ တနည်းအားဖြင့် သူနေထိုင်ရမည့် နေရာအရပ်ဒေသသည် အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လည်း ဆက်နွယ်နေကြောင်း ဖော်ပြပေသည်။
ထို့ကြောင့် …ထိုမေးခွန်းအတွက် မည်သည့်အရပ်ဒေသတွင် အခြေချခွင့်ရနိုင်မည်ကို အတိအကျ မဖြေပေးနိုင်ပါကြောင်း နှင့် …၊ ဖြေပေးနိုင်သည်မှာ…ဘ၀တွင် နေရာမတည်မြဲတတ်ကြောင်း၊ အပြောင်းအရွှေ့ များပြားရတတ်ကြောင်း၊ တစ်နယ်တစ်ကျေးတွင် အိမ်ယာထူထောင်ရတတ်ကြောင်း နှင့် အိမ်ထောင်ဖက် နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီး အခြေချမှုများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကြောင်း သာ ဖြေပေးလိုက်ရပါသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် သျှောင်နောက် ဆံထုံးမပါဘဲ ၊ ဆံထုံးနောက်သျှောင်ပါ လိုက်ပါရတတ်ကြောင်း ….ကျွန်တော် တွေးတောဆက်စပ်မိသမျှ ဖြေကြားပေးခဲ့မိပါသည်။
ဇာတာရှင်သည် မထင်မှတ်ထားဘဲ တောင်ပေါ်သူတစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရသည်.။ တစ်ဦးတည်းသောသား ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် ….မိဘများနှင့် ခွဲခွာပြီး …၊ ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ ..တောင်ပေါ်ဒေသသို့ လိုက်ပါ အခြေချခဲ့ရသည်။ သမီးကလေးတစ်ဦးထွန်းကားသည်။ များမကြာမီ ဇနီးဖြစ်သူ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သဖြင့် အိမ်ထောင်ရေး ပျက်ဆီးခဲ့ရသည်။ လက်ရှိ ထိုတောင်ပေါ်ဒေသတွင် ဆက်လက်နေထိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး …မကြာမီ ပြောင်းရွှေ့တော့မည် ဖြစ်လေသည်။
ဇာတာ ရှင်သည် ..မရဏဌာနရှိ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ၏ ဂြိုဟ်အိပ်ထူလ နှင့် နာမည်အဖျားစာလုံးနှင့် ပက္ခ မိထားသော စနေအန္တရဒသာ ထဲတွင် ထိုအိမ်ထောင် ပျက်ဆီးခဲ့သည်။ အပြစ်ပေးသောဂြိုဟ်တို့သည် ယင်းတို့၏ ဒသာကာလ (လွှမ်းမိုးမှုအားကြီးချိန်တွင်) အပြစ်ကိုပြုမည်သာဖြစ်သည်။
မမြင်ရသော ကံတရားဟူသည်မှာ …..ဆန်းကြယ်လှပေသည်။ ယင်းကိုသိမြင်နိုင်ရန် အတွက် လောကြီးစွာ တွေးတောပြီး မသိမြင်နိုင်ပါ။ အကြောင်းအကျိုး စေ့စေ့ငုငု ဖြေးဖြေးမှန်မှန် ဆက်စပ်မှသာ ဆီလျော်မှု ရှိစွာ ပုံပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်လေသည်။ ထို့အတူ ….နတ်မျက်စိပိုင်ရှုင်များ မဟုတ်ကြကုန်သော အကြင် ဗေဒင်ပညာရှင်တို့သည်လည်း …အရာအားလုံးကို ပြတ်သားစွာ မြင်နိုင်သည်ကား မဟုတ်ပါပေ။ ပညာဥာဏ်မျက်စိ ..ဖြင့် သင့်/မသင့် ခွဲခြားဆန်းစစ်ပြီး …ဟုတ်မှန်မှုရှိနိုင်သည်တို့ကို တွေးတော ဟောဆိုပေးရခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
ဟောဆိုပေးသူဘက်မှ စောင့်ထိမ်းရမည်ကား …..မှန်တိုင်းမဟော ၊ သင့်မှဟောရာ၏။ အကျိုးထက် အပြစ်ဖြစ်နိုင်လျှင် လှပ်ခဲ့ရ၏။ ထို့အတူ အသိမှန်အတိုင်း ၀န်ခံဟောဆိုရာ၏။ ကိုယ်တိုင်ပြတ်ပြတ်သားသား မသိလျှင် လည်း… (မသိသဖြင့် အားကိုးယုံကြည်စွာ မေးမြန်းလာသူအား ခပ်တည်တည်ဖြီးဖြန်းဟောဆိုခြင်းမျိုး ) မပြုအပ်ပါပေ။
သေချာနိုင်သည်ထက် အသေချာနိုင်ဆုံး အချက်များကိုသာ ဦးစွာ ရှာဖွေသင့်ပြီး ၊ ယင်းအချက်များထဲမှ …ဆိုင်ရာဇာတာရှင်၏ ဘ၀တစ်လျှောက်တွင်….အကျိုးဖြစ်စေနိုင်မည့် သိသင့်သိအပ်သည်များကို ရွေးထုတ်ဟောဆို အကြံပြုပေးသင့်ပေသည်။ ဟောစာတမ်းတစ်စောင်သည် … အာသာဖြေ အပျင်းပြေဖတ်စရာ …ပေါစာတမ်း မဖြစ်သင့်ပါပေ။